75 taona an'ny ONU: Ny fiaraha-miasa sy ny fahatokisana dia zava-dehibe toy ny taloha
Home » Travel Associations News » 75 taona an'ny ONU: Ny fiaraha-miasa sy ny fahatokisana dia zava-dehibe toy ny taloha
Ny Firenena Mikambana, izay UNWTO mirehareha amin'ny maha-anjara azy, natsangana mba hampiroborobo ny fandriam-pahalemana eo amin'ny firenena ary ahafahantsika miara-miasa hanorina ho avy tsara kokoa ho an'ny rehetra.
75 taona izao, ity iraka ity dia misy ifandraisany bebe kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny idealy izay ivon'ny rafitry ny Firenena Mikambana: ny firaisankina, ny fiaraha-miasa ary ny fitadiavana ny fitoviana dia ireo idealy ilaina ihany koa mba hiantohana ny fahasitranana antsika amin'ny voka-dratsin'ny areti-mandringana COVID-19.
Marina izany amin'ny faritra rehetra amin'ny fiarahamonina misy antsika, tsy latsa-danja amin'ny fizahan-tany. Manerana an'izao tontolo izao, olona an-tapitrisany maro no miandry fatratra ny fizotran'ny fizahan-tany. Ho an'ny maro, miankina amin'izany ny fivelomany.
Noho io antony io dia nivoady ny UNWTO fa tsy hijanona. Na dia eo aza ny hafa izay mitaky fitandremana, dia manana andraikitra isika handroso - ary hitondra ny sisa amin'ny sehatra, ary koa ny mpitondra politika.
Ny fivoriana fahenina an'ny Komitin'ny krizy fizahan-tany eran-tany dia nanasongadina ny maha-tapa-kevitra ny hifindra indray ny faritra rehetra amin'ny fizahan-tany. Indray mandeha indray, tamin'ny alàlan'ny Komity dia nahomby izahay tamin'ny fanangonana feo marobe, taratry ny fahasamihafan'ny fizahan-tany. Anisan'izany ireo mpitarika ara-politika sy ara-barotra - ireo izay afaka manova hevitra ho lasa hetsika.
Izahay ihany no matanjaka kokoa. Hifantoka amin'ny herin'ny sehatra tsy miankina isika sy ny fanapahan-kevitry ny governemanta hampiditra andiany vaovao momba ny fiarovana ny fiarovana ny fizahantany.
Ireo dia hanome mari-pamantarana marimaritra iraisana momba ny fiarovana sy ny fidiovana, ilaina indrindra raha te hanana fahatokisan-tena amin'ny dia iraisam-pirenena isika.
Mandritra izany fotoana izany dia tsapantsika fa tsy te-hahatsapa ho voaro ny olona rehefa mandeha. Tian'izy ireo homena toky koa fa hotohanana izy ireo amin'ny fotoana tsy azo antoka.
Noho io antony io, ny UNWTO koa dia hametraka kaody iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny mpizahatany, ary miasa izahay hiantohana ny fanjakana mpikambana rehetra, tsy ireo ao amin'ny faritra UE ihany, no tafiditra ao anatin'ny drafitra hamerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena malalaka ho an'ny olona. manerana an'i Eropa.
Ny hetsika rehetra ataontsika dia tarihin'ny fandinihana mazava sy mazava momba an'io toe-javatra mivoatra haingana io.
Toy ny fampahalalana diso momba ny loza mety hitranga amin'ny fahasalaman'ny COVID-19 dia atahorana koa ny ain'olona, ​​dia toy izany koa ny fampahalalana diso momba ny fiarovana ny fiveloman'ny toeram-pizahantany iraisam-pirenena.
Hatramin'ny nanombohan'ity krizy ity dia ny UNWTO no loharanom-baovao marim-pototra, voamarina ho an'ny faritra rehetra amin'ny sehatray, ary koa ho an'ny governemanta sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. Ny angon-drakitra sy ny fomba fijerinay dia nitarika ny valintenin'ny fizahan-tany ary ankehitriny mampahafantatra ny fanarenana azy.
Rehefa mankalaza ny fiaraha-miasa sy fandrosoana 75 taona ny Firenena Mikambana, mijoro ao ambadiky ny fampielezana "Voamarina" izahay, natomboky ny sekretera jeneraly António Guterres mba hisorohana ny fanaparitahana vaovao diso nefa koa manaja ny fahalalahana maneho hevitra.
Afaka miverina soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena - efa hitantsika io tamin'ny alàlan'ny fiverenan'ny tranga manokana. Ary izahay dia miara-miasa akaiky amin'ireo seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary mpamatsy fizahantany mba hampazava fa ny fizahantany dia mitarika amin'ny fomba mahomby amin'ny fampifanarahana ny zava-misy vaovao.
Ny tombony azo amin'ny famerenana indray ny fizahantany dia ho tsapa mihoatra ny sehatra misy antsika. Hanampy amin'ny fanombohana ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarentsika sy ny fiarahamonintsika izany.
Ary hanampy antsika hanomboka ny 75 taona ho avy ny iraky ny Firenena Mikambana hitondra fandriampahalemana sy fanambinana ho an'ny rehetra, miaraka amin'ny finiavana tsy hamela olona any aoriana.
Misy famantarana ny fanarenana ny Hotely InterContinental
World Tourism Network (WTN): Ny feo hafa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany